China otu esi eji ndị na-emepụta eriri ọbara | Isi
Etu esi eji eriri ọbara ọbara?
Ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-etinyekwu uche na ahụ ike ha ma na-aga na Medicallọ Ọrụ Ahụike iji nye ahụike ha maka nyocha zuru ezu. N'ihi nke a, mkpa ọgbụgba ọbara dị ugboro atọ karịa ka ọ dịbu. Otu esi eji eriri lancet eme ihe ghọrọ ihe dị oke mkpa. Otu esi eji lacet ọbara wee dịwanye mkpa.
Ugbu a ka anyị mụta otu esi eji ụdị akuko ọbara.
Etu esi eji Lancet Press
Nzọụkwụ 1 Buputa okpu mkpuchi ma tụfuo ya ma debe okpu ahụ n'ebe dị mma.
Nzọụkwụ 2 Tinye lancet fimly megide saịtị mgba ahụ iji rụọ ọrụ. Ewepụla ngwaọrụ ahụ ruo mgbe a nụrụ ụda pịa.
Nzọụkwụ 3 Tụfuo lancet ahụ a na-eji mee ihe na ngwa ngwa sharps kwesịrị ekwesị nwere okpu na lancet ahụ.
Pịa lancet ọbara 2
Kwụpụ 1 ighikota okpu ruo mgbe ọ ekewapụ mfe si lancet ahu. Adọkpụrụla.
Ọ bụrụ na ị dọpụta ya, agịga ahụ ga-apụ thedọ a na-ejizi ihe a ga-eji mee ihe lancet;
Nzọụkwụ 2 Nzọụkwụ 2 Tinye lancet fim ahụ megide ebe mgbapu iji rụọ ọrụ. Ewepụla ngwaọrụ ahụ ruo mgbe a nụrụ ụda pịa.
Kwụpụ 3 Tụfuo lancet ahụ e ji mee ihe n'ime akpa ihe dị nkọ. Igwe a na-ejikarị arụ ọrụ nwere ike ịnwe ọtụtụ ọbara na ya.
Ozi nke eriri ọbara ọbara
ORIETMBEDA nwere ike ibunye ụdọ ọbara dị iche iche. Ihe ighikota nke ighikota, nke a na-agbanye aka, nke ndi ozo di iche iche di iche iche na ahihia. Ihe mgbochi ọbara enwetaworị akwụkwọ CE ISO na FDA.
Dabere na ogo magburu onwe ya na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, anyị emeriwo aha ọma n'ọtụtụ ógbè dị iche iche, dịka Germany, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, United States, South America na ihe ndị ọzọ. Karịsịa na Chile na Mid-East, anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa.